…. उठेर हेर्दा श्रीमानको मृ’त्यु भैसकेको थियो | समाचार
…. उठेर हेर्दा श्रीमानको मृ’त्यु भैसकेको थियो
June 1, 2021 June 1, 2021 NepstokLeaveaComment on …. उठेर हेर्दा श्रीमानको मृ’त्यु भैसकेको थियो
काठमाडौ । विश्वमा अनेक खालका घटनाहरु घट्ने गर्छन । ति मध्य केही त पत्याउन पनि नसकिने खालका हुन्छन् । यस्तै एउटा अचम्मको घ टना रसियामा घटेको छ । त्यहाँ १०१ किलोग्रामकी श्रीमती आफ्नै पतिको मुखमा बस्दा श्रीमानको मृ त्यु भएको छ । यी मापसे गरेकी श्रीमतीले त्यस्तो काम गरेकी हुन् । उनी आफ्नो पतिलाई चुप गराउन चाहान्थिन् । रसियाको नोभोकुन्नेत्स्क शहरमा बस्ने दम्पतीबीच मापसेको तालमा सामान्य वि’वाद भएको थियो । पत्नी आफ्ना पतिसँग माफी मगाउन चाहन्थिन् ।
तर रिसाएको झोकमा उनी आफ्नो पतिको मुखमा बसिन् । श्रीमतीले सास फेर्न न सक्ने गरेर मुखमाथि आफू बसिन् त्यसपछि श्रीमानको सा स नि’स्सासिएर नि धन भएको हो । १०१ किलोग्रामकी श्रीमतीआफुमाथि बसेपछि उनले केही गर्न सकेनन् । जब महिलाले आफ्नो श्रीमानको मुख छोडिन् तब धेरै ढिला भैसकेको थियो । त्यतिखेर उनका श्रीमान यो संसारबाट वि दा भइसकेका थिए ।
रसियाका केही सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको समाचार अनुसार बुबाको ला श पहिलो पटक छोरीले देखेकी हुन् । त्यस त्रा सदीको बारेमा, महिलाले भनिन् कि, ‘मैले घ टना गराउन चाहेको थिइन, बस उसलाई शान्त गराउन चाहन्थें ।’
ल’डाँ’ईको समयमा उनका श्रीमान निरन्तर बोल्दै थिँए । उनी भन्छिन्, ‘उसको मुख बन्द गर्नका लागि उमाथि म बसेकी थिँए, मलाई थाहा थिएन कि यसकारण उसको मृ त्यु हुन्छ ।’ ति महिलाले वास्तविकता कसैलाई भनेकी थि इनन् । तर चिकित्सा प्रतिवेदन बाहिर आएपछि सबै कुरा खुल्यो ।
परीक्षण रिर्पोटमा श्वा स फेर्न न सकेको कारणले गर्दा मृ त्यु भएको कुरा पत्ता लाग्यो । ती महिलाले प्र हरीलाई दिएको जानकारी अनुसार उनीहरु दुई जना राति मा पसे गरिरहेका थिए । पि’उँ’दै जाँदा उनीहरुबीच ब हस सुरु भयो । कुरा यति धेरै बढ्यो कि दुवैले एक अर्कालाई आ’रोप लगाउन शुरु गरेका थिए । त्यसै बीच, महिला रि’साएर यसो गरेकी थिइन् ।
२ दिनपछि काठमाडौं उपत्यकामा नि’षेधाज्ञा खुकुलो हुने, यस्तो हुन्छ अबको नि’षेधाज्ञाका मोडालिटी, हुने छ निकै सहज !
‘हात का’टिए पछि कम्पनीले नि’काली दियो’ घर आउने पैसा छैन, मलेसियामा नेपालीको बि’चल्ली (तुरुन्तै हेर्नुहोस्)
महामारीमा पनि कालोबजारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि
सांसद शाह सवार गाडी नवलपरासीमा दुर्घटना
वीरगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस नागढुङ्गामा चेक जाँच गर्दा समातिए यि युवक